Q-Shintsha ND YAG 1064 NM 532nm Laser ubuhle yezokwelapha umshini U-SQ1
Tattoo ukususwa, isikhumba rejuvenation, laser
♦ 12 Inch esikrinini esikhulu, 270 ° rotatable
♦ High standard eqinile aluminium igobolondo
♦ 2000W okokufaka yamandla aphezulu
♦ 100% Korea amazwe 7 jointed ukukhanya ukudluliswa ingalo
♦ 8ns ± 2ns ishayela ububanzi, umonakalo isikhumba ezincane
♦ 1- 10Hz okusheshayo ukwelashwa kahle
Uhlobo Laser: Nd: Yag Laser
Indawo Umsuka: Guangzhou, China (Mainland)
Igama Brand: Urbeauty
Inombolo imodeli: U-SQ1
Isici: Pigment Ukususwa, Skin Rejuvenation, Tattoo Ukususwa, lokususa imidwebo imishini laser
usayizi umshini: 68 * 40 * 82cm
Iphakheji :: 100 * 50 * 115 cm
Umshini Gross Isisindo: 75kg
ukupakisha isisindo: 105kg
indlela ukupakisha: lokhuni
Umshini lwemsebenti: lokususa imidwebo imishini laser
Spot Usayizi: 1-8mm adjustable
Arm: ingalo 7-ngokuhlanganyela
Isiqinisekiso: iminyaka engu-2
Cooling uhlelo: amanzi Ukupholisa nomoya Ukupholisa futhi cindezela
Q-switch Laser ND YAG q Laser- inkinobho nd: YAG laser
lokususa imidwebo imishini laser
Umsebenzi main Tattoo ukususwa
Umsebenzisi Nobuhle Medi-Spa
Nobuhle Centre / Tattoo Ukususwa
ngamandla okusezingeni eliphezulu nd YAG laser umshini lokususa imidwebo q: inkinobho
Dermis lesikhumba, ezifana lentigines, izindawo zokudweba imifanekiso blue noma emnyama, umbala ishiya.
Epidermis lesikhumba, ezifana freckle, UFleck abaphezulu kanye ophuzi, obomvu, izindawo zokudweba imifanekiso ensundu, umbala lip
umthombo wokukhanya Q-Shintsha ND: YAG okuqinile-isimo laser
wavelength ububanzi 1064nm, 532nm
Amandla ezingeni 200-1500mj
Pulse ubude 8 ± 2ns
Ukushayela phansi kwenhliziyo 1-10Hz adjustable
Ubukhulu machien 68cm × 40cm × 82cm
usayizi ukupakisha 100 * 50 * 115cm
umshini isisindo Net 75kg
Packing isisindo 105kg
amandla imfuneko AC110-240V, 50HZ
Spot Usayizi 1-8mm adjustable
izinga okusezingeni nd YAG laser hair ukususwa imishini epilator usayizi 1. Spot: 1-8mm adjustable
2. Pulse amandla: 200-1500mj
3. Pulse Ukukala: 1-10 Hz, isikhathi ngasinye ungakwazi ukwengeza by 1 Hz
4.7-Kuhambisana Joint Spring Arm
Red Light kuhloswe indawo: ngamandla okusezingeni eliphezulu nd YAG laser umshini lokususa imidwebo q: inkinobho
Ukwelashwa Spot Usayizi ngu Handpiece: 1-8mm
7-Kuhambisana Joint Spring Arm
1. Ukwelashwa of epidermis futhi dermis lesikhumba
Isebenzisa umphumela alufakwa we Nd: laser YAG, le laser igcwale epidermis ku dermis okubandakanya imali sombala mass. Kusukela pulses laser e nanosecond kodwa amandla super eliphezulu, shot sombala mass zigcwala ngokushesha futhi amakhefu ku izingcezu ezincane, okuyinto kuyoqedwa ngohlelo umzimba.
2. Ukwelashwa kwe-dilatation ka capillary isitsha
Isebenzisa umphumela sokushisa kwemini Nd: Yag Laser ,, le laser is amuncwa hemachrome e isitsha capillary ke isitsha capillary babe ivinjiwe futhi zinyamalale.
1. Ayikho ukulinyazwa follicle izinwele kanye isikhumba evamile engashiyanga sesibazi.
2.The zakamuva hi-tech laser ukuqhuma endaweni twinkling.
3.Short ekwelapheni isikhathi operation lula
4. High elawulwa okuqinile-isimo laser sokuhambisana kwamazinga amazwe ngamazwe.
5. kwikhompyutha nge big LCD
6. umqondo Amancane ubuhlungu, Anesthesia ayidingeki ezimweni eziningi
7. Akukho Ukuphumula futhi kokuphazamiseka imisebenzi evamile, kungekho side effect.
8. Olubanzi nesineke futhi ukubuya fast of lokutshala izimali.
izinga okusezingeni lokubhekana YAG laser imishini izinwele ukususwa epilator
Okulandelayo: Portable SHR IPL E-Light for hair removal and skin Rejuvenation U-SHR950s(colors optional)
Zokuphuma SHR IPL MACHINE
Ultrashape 3D Ugxilile ultrasound Fat Ukususwa sl ...